Uefa oo Eric Bailly ganaaxday saddex kulan, ogoow kulamada uu maqnaan doono
Wednesday, December 12th, 2018 - 10:42:32
Monday July 24, 2017 - 22:33:20 in Wararka by Kubad Bile
Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub (Uefa) ayaa saddex kulan ganaax dul dhigtay daafaca kooxda Manchester United Eric Bailly kadib kaarkii casaanka uu qaatay kulanki lugta labaad ee afar-dhamaadka koobkaUefa Ueropa League oo ay kooxdiisa la ciyaartay Celta Vigo.
Bailly ayaa marka hore hal kulan la ganaaxay kadib markii uu daqiiqadi hii u dambeeyay kulanki Old Traford ka dhacay uu qaatay kaarka casaanka isagoo seegay kulanki Finalka oo ay kooxdiisa la ciyaartay kooxda Ajax.
Xddiga heerka caalami ee dalkaa Ivory Coast ayaa garoonka laga saaray kadib marii laacibka Celta Vigo katirsanaa horeyna ugu soo ciyaaray Man City John Guidetti, iyo Facundo Roncaglia uu iska hor imaad dhex maray , taasoo sabatay in garoonka laga saaro.
Go’ankan ayaa yimid kadib markii ay guddiga anshaxa ay kiiskan dhageysteen, waxeyna go’aamiyeen in ganaaxa halka kulan ahl oo badalo saddex kulan taasoo ka dhigan inuu seegi doono kulana Uefa Super Cup oo ay kooxdiisa United dalka Mecedonia kula dheeli doonto kooxda Real.
23 jirkan oo ciyaaray qeyb kamid ah kulankii labada koox ee tartanka Internatinal Champions Cup, ayaa sidoo kale maqnaan doono kulanka koowaad ee wareega Groupyada koobka horyaalada Yurub.